Jose Mourinho oo wax laga weydiiyey doonista Man United ee ‘Alexis Sanchez iyo Xaalada suuqa kala iibsiga ee kooxdiisa? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Jose Mourinho oo wax laga weydiiyey doonista Man United ee ‘Alexis Sanchez iyo Xaalada suuqa kala iibsiga ee kooxdiisa?
(13-1-2018) Macalinka kooxda kubada Cagta Manchester United Jose Mourinho oo saxaafada Shir Jaraa id u qabtay Jimcihii ayaa wax laga weydiiyey waxa kajira in Manchester United dooneyso Cayaaryahanka dalka Chile ee u dheela Arsenal ‘Alexis Sanchez.
Jose Mourinho ayaa diidey in uu si cad oo waadax ah uga hadlo sheekada beryahaan warbaahintu qoreysey ee ah in Manchester United dooneyso Cayaaryaahnka ‘Alexis Sanchez kaas oo sidoo kale siweyn loola Xiririyey Manchster City.
Mourinho ayaa jawaabta u bixiyey sidatan” Madoonayo in aan wax badan ka sheego Cayaaryahanka Arsenal waxaan hubaa in ‘Alexis Sanchez uu yahay Xiddig mucjiso ah kana dheel khadka dhexe iyo Weerarka intaba.
Sow anshax xumo maaha in aad faraha lagasho Cayaaryahan koox kale u dheela iyo aad ka hadasho sheekooyin isaga ku saabsan waan xushmeynayaa sidaa daraadeed madoonayo in aan faraha lagalo shaqo aan aan aniga I quseyn ayuu yiri Jose Mourinho.
Sidoo kale Macalin Jose Mourinho oo sii hadalaya ayaa yiri Waxaan cadayn karayaa in aynaan gal gal fara badan ku lahayn suuqa kala iibsiga bishaan Janaayo mana cadayn karayo hadii aan soo qaadan doono Cayaartoy cusub sidaa daraadeed wax badan kama sheegi karo arimaha suuqa Cayaartoyda.